युलिन महोत्सव: चीनको सबैभन्दा घृणित महोत्सव | कुकुरहरु को विश्व
लुर्ड्स सरमिआन्टो | | पशु दुर्व्यवहार
प्रत्येक वर्ष हजारौं कुकुरहरू मारिन्छ र युलिन भन्ने शहरमा एक स्वादिष्ट पदार्थको रूपमा सेवा गरिन्छ, दक्षिण पूर्वी चीनमा अवस्थित। दश दिनको लागि, एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ जहाँ मुख्य आकर्षण कुकुरको मासु खाँदै छ र गर्मीको सुरूवात मनाउन लीची रक्सी पिइरहेको छ।
धेरै सेलिब्रेटीहरूले पशु अधिकार अभियानमा आफ्नो आवाज उठाएका छन्, जसको एक मात्र उद्देश्य हो डरलाग्दो अभ्यास र अधिकांश पश्चिमीहरूलाई भ्रमित गर्ने अभ्यास रोक्नुहोस्.
पशु अधिकार समूहहरु कुकुरहरु चोरी भएको विश्वास गर्छन्। कुकुरहरू र बिरालाहरू अवैध रूपमा डरलाग्दा अवस्थामा ढुवानी गरिन्छ, यति धेरै कि लामो यात्राको दौरानमा कोही मर्दैन।
एक पटक युलिनमा, यी कुकुरहरू फोहोर साना पिंजरामा छिराइन्छन्, जहाँ अन्तत: तिनीहरूलाई कुटिन्छ अर्को, हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं यस भयावह चाडको केहि विवरण जुन यस चिनियाँ सहरमा मनाईन्छ।
1 प्रत्येक घटनामा कति जना बिराला र कुकुरहरू मर्दछन्?
1.1 के तपाईं महोत्सवमा कुकुरहरू मात्र खानुहुन्छ?
1.2 के सरकारले यो नरसंहार रोक्न सक्छ?
1.3 के त्यो चाड वास्तवमै रद्द भयो?
1.4 सुन्दर कुकुरहरु कहाँबाट आउँछन्?
1.5 उनीहरू कहाँ लिइरहेका छन्?
2 जनावरहरू कसरी मर्छन्?
2.1 के कुकुरहरु साँच्चै जीवित उमालेको छ?
2.2 के यो यातना महोत्सवको हिस्सा हो?
3 के बिराला र कुकुरको मासु खाने चीनमा साधारण छ?
4 किन यो चाड रोकिंदैन?
5 यदि त्यो चाड समाप्त भयो भने, यूलिनमा फेला परेका कुकुरहरूलाई के हुन्छ?
प्रत्येक घटनामा कति जना बिराला र कुकुरहरू मर्दछन्?
यसको चरम मा, the युलिन कुकुरको मासु उत्सव, कम्तिमा १०,००० देखि १,10,००० euthanized कुकुरहरूका लागि जिम्मेवार थियो।
२०१ 2014 मा, यो रिपोर्ट गरिएको थियो त्यो संख्या दुई हजार वा तीन हजार घरपालुवा जनावरमा खस्कियो। विश्वसनीय स्रोतहरूले यो संख्या गत वर्ष एक हजार भन्दा कममा ल्याए। तथ्या ,्क, प्रमाणीकरण गर्न गाह्रो भए पनि व्यापक रूपमा भिन्नता, करीव १० करोड बलिदानहरू।
के तपाईं महोत्सवमा कुकुरहरू मात्र खानुहुन्छ?
महोत्सव भने गर्मी संक्रान्ति मार्क। उत्सवको पूरा नाम युलिनको लिची र कुकुर मांस महोत्सव हो। धेरै बियर पनि खपत हुन्छ। दुर्भाग्यवस यो पनि रिपोर्ट गरिएको छ कि बिरालोको मासु खपत भएको छयद्यपि कम परिमाणमा।
के सरकारले यो नरसंहार रोक्न सक्छ?
युलिनको कुकुरको मासु उत्सवको सम्बन्धमा, सरकारले उहाँलाई कुनै पनि हिसाबले प्रतिबन्ध लगाएको छैन बाटो। यो कुनै प्रकारको अनौपचारिक सम्झौता जस्तो देखिन्छ, कुकुरका मासु प्रेमीहरू बीचमा एक पटक एक पटक भेट्न।
के त्यो चाड वास्तवमै रद्द भयो?
यो अफवाह प्रत्येक बर्षमा दोहोरिन्छ, सामान्य रूपमा अन्य त्यौहारहरूको सम्बन्धमा सोशल मीडियामा भ्रमको कारण। धेरै जना यसको अन्त्य हुन कुर्दछन्, तर त्यो चाड चरण बाहिर फेला पर्दछ, सार्वजनिक दबावको कारण।
सुन्दर कुकुरहरु कहाँबाट आउँछन्?
केही अनुसन्धानका अनुसार यी कुकुरहरू पालेका हुन् भन्ने धारणा गलत छ। विशाल बहुमत चोरी, क्याप्चर वा विषाक्त छन् र अर्को कुकुरहरु संग साना पिंजरे मा राख्नु।
यो समयमा तिनीहरूसँग खाना वा पानी छैन र रोगहरू छिटो फैलिन्छन्। यी रोगहरूमा क्यानाइन डिस्टेम्पर, पार्भोभायरस, र, लगभग निश्चित रूपमा, रेबीज समावेश गर्दछ।
उनीहरू कहाँ लिइरहेका छन्?
कुकुर बूचुवा घरहरू फोहोर छन्, ती नियमित छैनन् र तिनीहरू पनि धेरै निर्दयी छन्। जनावरहरूमा क्वारेन्टाइन छैन, न वधमा, न यातायातको बेला।
यी बूचड़खानेहरू प्राय: शहर क्षेत्र र समुदायबाट धेरै टाढा अवस्थित हुन्छन्, जहाँ जहाँ ठाउँमा बिराला र कुकुरको मासु खान सामान्य देखिन्छ। जनावरहरू सडकमा मार्न सकिन्छ.
जनावरहरू कसरी मर्छन्?
यो गाह्रो प्रश्न हो, किनकि कुकुरहरूलाई मार्ने सम्बन्धमा नियमहरू छैनन्।
सामान्यतः, कुशलको लागि टाढाको मृत्युको सामना गर्नुहोस्। तिनीहरू धातुको हुकका साथ घाँटी वरिपरि लैजान्छन् र उनीहरूको पिंजरेबाट तान्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई कुचो अथवा घाँटीमा छुराइन्छ वा घाँटीमा रगत बगिन्छ।
तिनीहरूलाई मार्नको अन्य विधिहरूमा उनीहरूलाई झुण्ड्याएर वा इलेक्ट्रोक्युट गर्नु समावेश छ। यो यो कुकुर द्वारा कुकुर हुन्छ, त्यसैले अन्य कुकुरहरूले उनीहरूको अगाडि बहु मृत्युको सम्भावना छ, तिनीहरूमा आतंक फैलिरहेको छ।
के कुकुरहरु साँच्चै जीवित उमालेको छ?
यद्यपि हामी यसलाई नियमित अभिप्रायको रूपमा विश्वास गर्दैनौं, तर अप्रभावकारी हत्या गर्ने तरिकाहरू र यसमा संलग्न हत्याको मापनको मतलब यो हो यो धेरै सम्भावना हुन्छ कि कुकुरहरूको खाना पक्कै तिनीहरूको मृत्यु हुनुभन्दा पहिले सुरु हुन सक्छ।
के यो यातना महोत्सवको हिस्सा हो?
यो भन्नु कुरो बढाइएको छैन कि कुकुरले जे दु: ख भोग्दछ त्यो यातना हो, यद्यपि यो यातना क्रूर पक्राउ, यातायात र वधका कारण भएको हो, कुकुरको पीडालाई तृप्ति, मनोरन्जन वा बढाउनको लागि जानाजानी इच्छा भन्दा कुनै तरिका बाट पकवान।
के बिराला र कुकुरको मासु खाने चीनमा साधारण छ?
यद्यपि बिराला र कुकुरको मासु खाने चलन धेरै वर्षदेखि चीनमा रहेको छ, विशेष गरी गुआंग्डोंग, गुआंग्सी, गुईझो प्रान्त, र उत्तरपूर्वी चीनमा, la उपभोग को आवृत्ति र खपत राशि वर्ष बर्ष घट्दै छ.
गैरसरकारी संस्थाले गरेका प्रयासहरुका कारण, व्यक्तिहरुलाई, दुबै राष्ट्रिय र विदेशी पशु सुधार गर्न चीन र स्थानीय अधिकारीहरु संग उनीहरुको काम, बिराला र कुकुरको मासु उपभोक्ताहरुको संख्या, यो हरेक वर्ष संकुचन गर्न जारी छ।
धेरै जनावरहरू चोरी भएको तथ्यको बाबजुद पनि, मासुको अझै उच्च मूल्य छ। यो अन्धविश्वास वा टॉनिकको कारण वा हुनसक्छ यसको लागि उपभोग गरिन्छ परम्परागत। वास्तवमा, यदि बिरालो वा कुकुरको मासु अवैध बनाइएको थियो, भोली कोही भोकाउनेछैन।
किन यो चाड रोकिंदैन?
Influencing कानून एकदम जटिल कुरा हो र गर्न धेरै गाह्रोयद्यपि, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाहरू आएका छन् जुन ध्यान दिएका छैनन्।
यसमा करीव नौ लाख व्यक्तिहरू छन् जसले बिराला र कुकुरको मासुको उपभोग समाप्त गर्न प्रस्तावित कानूनको लागि अनलाइन मतदान गरेका छन्। यस बीच, जबकि कुकुर चोरी कथाहरू चिनियाँ मिडियामा एक स्थिरता हो, तिनीहरू अझै पनि चकित गर्न शक्ति छ र त्यहाँ एक बढ्दो भावना छ कि समय आयो र यो सबै परिवर्तन गर्ने समय आएको छ।
बिराला वा कुकुरको मासु खपत, अवैध हुनु, धेरै स्वागतयोग्य हुनेछ र यसले एकै समयमा अपराध र क्रूरतालाई कम गर्दछ।
एनजीओ र बहादुर पशु प्रेमीहरू पनि असंख्यको लागि जिम्मेवार छन् कुकुर र बिराला हरेक वर्ष उद्धार गर्दछविशेष गरी चाड हुनु भन्दा पहिले। यो एक ठूलो उपक्रम हो, किनकि उद्धार ट्रकको रोकावटबाट सुरू हुन्छ, तर कुकुर वा बिरालाहरूको हेरचाह धेरै वर्षसम्म जारी रहन्छ।
यदि त्यो चाड समाप्त भयो भने, यूलिनमा फेला परेका कुकुरहरूलाई के हुन्छ?
सम्भावित परिदृश्य त्यो हो बर्ष-बर्ष बढि दबावले चाडलाई बनाउँदछ युलिन कुकुरको मासु आकारमा संकुचन गर्न जारी रहन्छ.
सार्वजनिक दबाव पहिले नै गरिरहेको छ र प्रक्रियामा जीवन बचाउने। यो दबाव हो कि यो महत्वपूर्ण छ। यदि उपभोगको लागि कुनै भूख छैन भने, आपूर्ति पनि कम हुनेछ, क्रूरता पनि। त्यो उत्सव अचानक बन्द भयो भने, हामी विश्वस्त थियौं कि स्थानीय समूहले हाम्रो समर्थनमा कुकुरहरूलाई बचाउन सक्दछन्।
हाल, त्यहाँ छ स्थानीय उद्धार समूहहरू आइसकेका छन् युलिनको कुकुरको मासु उत्सव समाप्त हुनका लागि धकेल्दै। यति धेरै समूहहरू कडा परिश्रम गर्दै, यी बिरालाहरू र कुकुरहरूको हेरचाह गर्न कुनै सहयोगको अभाव हुनेछैन ताकि अन्ततः उनीहरूको लागि नयाँ घरहरू फेला पर्‍यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: कुकुर संसार » हाम्रो बारेमा » पशु दुर्व्यवहार » यूलिन महोत्सव